Ooabraham - Xhosa - Francês Tradução e exemplos
Você procurou por: ooabraham (Xhosa - Francês)
ukuze animise namhla nibe ngabantu kuye, yena abe nguThixo kuni, njengoko wakuthethayo kuni, njengoko wakufungayo kooyihlo, ooAbraham noIsake noYakobi.
Khangelani, ndinisikele ilizwe. Ngenani, nakhe kwelo zwe wafungayo uYehova kooyihlo, ooAbraham noIsake noYakobi, ukuba wolinika bona, nembewu yabo emva kwabo.
Khumbula abakhonzi bakho, ooAbraham noIsake noYakobi. Musa ukukhangela ekugogotyeni kwaba bantu, nakokungendawo kwabo, nasesonweni sabo; hleze lithi ilizwe osikhuphe kulo,
Kothi, xa athe wakungenisa uYehova uThixo wakho kulo ilizwe abelifungele ooyihlo, ooAbraham noIsake noYakobi, ukuba akunike: imizi emikhulu, emihle, ongayakhanga;
ukuba umthande uYehova uThixo wakho, uliphulaphule ilizwi lakhe, unamathele kuye: ngokuba bubomi bakho, nokolulwa kweemini zakho; ukuze uhlale emhlabeni lowo awafunga uYehova kooyihlo ooAbraham noIsake noYakobi, ukuba wobanika.
usted es mi maestro (Espanhol>Inglês)duxit (Latim>Espanhol)nabanggit (Tagalo>Inglês)customitzat (Catalão>Inglês)picha za kuma kubwa na matako makubwa kabisa (Suaíli>Inglês)لإفراجٍ (Árabe>Italiano)rhubarb (Inglês>Tagalo)statui (Latim>Italiano)gavotte (Italiano>Inglês)mga tauhan ng pelikulang tanging yaman (Tagalo>Inglês)erhard (Dinamarquês >Francês)unrecognized (Polonês>Inglês)bouwproduct (Holandês>Sueco)ana miskin (Árabe>Inglês)makikita mo ang hinahanap mo (Tagalo>Inglês)dattilografo (Italiano>Alemão)malcxastistino (Esperanto>Dinamarquês )suos (Latim>Italiano)servis et servabus (Latim>Italiano)人类才是我的生意 (Chinês (simplificado)>Indonésio)save me baby (Inglês>Latim)rga (Inglês>Dinamarquês )włączenie (Polonês>Alemão)kredītreitingā (Letão>Italiano)tyydyttävälle (Finlandês>Sueco)